आज प्रेमिहरुको प्रेम दिवस : कसरी मनाउँदा अविस्मरणीय बन्ला ? · Aawaj Nepal
आज प्रेमिहरुको प्रेम दिवस : कसरी मनाउँदा अविस्मरणीय बन्ला ?
आवाज नेपाल, २०७५ फाल्गुन २ बिहीबार
काठमाडाै‌- हरेक वर्षको फेब्रुअरी १४ मा संसारका विभिन्न भागमा प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाइन्छ ।विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै केही वर्षयता यो दिवस नेपालमा पनि भित्रिएको छ । विशेषगरी युवापुस्ताले यसको अनुशरण गरेको पाइएको छ ।वास्तवमा प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न चाहनेका लागि यो विशेष दिन हो । प्रेमी र प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमको सफलतामा खुसी प्रकट गर्दै भविष्यमा अझै गाढा प्रेम बसोस् भनी कामना गर्ने दिन पनि हो ।
भ्यालेन्टाइन डे विशेष बनाउन ठूलै योजना बनाएर घुम्ने र धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आजको दिनलाई यसरी सामान्य ढंगले मनाएर पनि स्मरणीय बनाउन सकिन्छ ।एक–अर्कासँग प्रशस्त समय बिताउने-प्रणय दिवसजस्तो विशेष दिनमा एक–अर्कासँग समय बिताउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपहार हो । यसका लागि, घरमै वा बाहिर दुवैजनालाई मनपर्ने ठाउँ रोज्न सकिन्छ ।
दिनको सुरुवात र अन्त्य विशेष बनाउने-अन्य दिनभन्दा आजको दिन विशेष बनाउन बिहानको सुरुवाती र रातको अन्त्यमा सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने कोसिस गर्नुहोस् । एक–अर्कालाई मनपर्ने क्रियाकलाप गर्नुहोस् । त्यस्तै, मनपर्ने खाना खाएर र उपहार साटासाट गरेर विशेष
बनाउन सकिन्छ ।
वातावरण रोमान्टिक बनाउने-वातावरण रोमान्टिक बनाउन फूल, चकलेट आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक–अर्कासँग टाढा भएका जोडीले फूल तथा उपहार पठाउन सकिन्छ ।वैज्ञानिक तथ्यअनुसार फूलले मानिसमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले, सरप्राइजको रूपमा फूल पाउँदा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्छ ।
योजना बुन्ने-आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई खुसी बनाउन कुनै विशेष योजना बनाउनुहोस् । यसका लागि आफूले भेट्ने ठाँउमा फूल, र उपहारले सजाउन सकिन्छ । यसबाहेक एक–अर्काका विशेष हुनका लागि मन पर्ने परफ्युम, ड्रेसअप लगाउन आवश्यक छ ।
लभलेटर/गीत/कविता लेख्ने-आफ्नो जीवनमा प्रेमी वा प्रेमिकाको महत्व झल्काएर सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यक छ । यसर्थ, उसका लागि लभलेटर, कविता लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् । यसले प्रेमी वा प्रेमिकालाई थप आकर्षित बनाउन सहयोग गर्छ । अझ माहोल रमाइलो बनाउन मनपर्ने गीतसमेत गाउन सकिन्छ ।
दुवैलाई मनपर्ने कुनै काम गर्ने -यही नै गर्नुपर्छ भन्ने नभए पनि दुवैलाई मनपर्ने कुनै काम गर्न सकिन्छ । सँगै बसेर काम गर्दा झन् रमाइलो महसुस गर्न सकिन्छ । समय भएमा कतै टाढा पनि जान सकिन्छ ।सरप्राइज दिने-सरप्राइज दिँदा प्रायः हरेक मानिस खुसी हुने गर्छन् । यसर्थ, आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकालाई खुसी बनाउन पनि कुनै विशेष सरप्राइज दिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि, मनपर्ने परफ्युम, गहना, कपडा, घुम्न जाने टिकट आदि दिन सकिन्छ । यो सामग्री नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।